Ka ikpuchi gi ekpuchi.
Ejiri Tarpaulins n'ọtụtụ ụzọ iji kpuchido ndị mmadụ na ihe site na ifufe, mmiri ozuzo, na ìhè anyanwụ. A na-eji ha n'oge a na-ewu ma ọ bụ mgbe ọdachi mechara iji chebe akụkụ ma ọ bụ nke mebiri emebi, iji gbochie ọgba aghara n'oge eserese na ọrụ ndị yiri ya, na iji ma chịkọta irighiri ihe. Ha bụ ...
Otu Anyị Si Eji Ewu Ewu nke Mma
Kechie ụlọ, makwaara site na ahare ụlọ nke ejiri mara ahia, na-egosiputa ihe sịntetik eji echekwa ụlọ. Wralọ na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi na-egbochi ihu igwe, na-egbochi mmiri ozuzo ịbanye na mgbidi mgbidi ka ị na-ekwe ka ikuku mmiri banye na mpụga. Ọ bụrụ na moistur ...
Advanced Tech Na-eme Roofers Safer.
Mkpuchi ahụ bụ ihe dịkarịsịrị ala, nke dịkwa oke mkpa na sistemụ ụlọ obibi ụlọ nke oge a. Ọ bụ akwa nke na - egbochi mmiri ụlọ na - egbochi mmiri ma ọ bụ dochie ya na ntinye mmiri, ọ bụrụ na akwa dị na mpụga emebi emebi. Mkpụrụ osisi dị n'okpuru mkpuchi mmiri na-ahọrọ n'okpuru ...